Rabitaanka Guud ee Maalgashiga: Sida ay u shaqayso - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Dulmarka Maalgelinta Rabitaanka: Sida ay u shaqayso
Waa maxay Rabitaanku?
Sida Ay Hamiyadu U Shaqeeyaan
Adeegyada Maareynta Lacagta
Barnaamijka Lacag Caddaan
Beddelka Maalgelinta Himilo
Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Himilooyinka Maalgelinta
Dhowr meelood oo aad ku maalgashan karto lacagtaada ayaa aad u badan laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah in la hubiyo in iyaga ka mid ah ay si habboon u maareeyaan sanduuqaaga oo aan kugu kicin kharashyo badan. Haddii aadan weli hubin la -taliye maaliyadeed oo ka madhnaa waaya -aragnimada maalinlaha ah, tixgeli Maalgelinta Rabitaanka.
Maqaalkani wuxuu ku siin doonaa dulmar guud oo ku saabsan sida hammigu u shaqeeyo. Si naxariis leh u akhri
Maxaa ka fiican oo aad ku tilmaami kartaa nidaamkan inuu yahay mid caddaalad ah marka uusan kaa qaadin wax la mid ah qof kasta oo kale bixiyo oo lagu siiyo fursad aad ku bixiso waxa aad u aragto inay ku habboon yihiin?
Jadwalka tusmada hoose wuxuu ku sii siin doonaa burbur ku saabsan maalgashigan damaca.
Hay'adaha maaliyadeed ee onlaynka kaliya ah ee u eg bangiyada waxaa la yiraahdaa neo-banks. Khidmadaha adeegga ee bangiyada neo-bangiyada ay dhigaan badiyaa waa xaddidan yihiin marka loo eego waxa ay bangiyada dhaqameedku ku soo dallacaan kharash ahaan.
Sidaa darteed, Hamiyayaashu waa bangi neo-bangi oo aad u kala duwan oo siiya sanduuq wadaag la wada oggol yahay, koonto maareyn lacag caddaan ah, iyo qiime aad u hooseeya macaamiisheeda.
Tan iyo markii la aasaasay 2015 -kii, rabitaannada waxaa si weyn u ilaalinayay macaamiisha oo ka daalay khaladka bangiga -dhaqanka.
Kharashyada aadka u hooseeya ayaa shaki la'aan ah sababta ugu weyn ee ay u leeyihiin dad badan oo iska diiwaangeliya koonto. Inkastoo tani aysan ahayn wax cusub, haddana aad bay u yar tahay
Markaad is -qorto, waxaad heli kartaa dhammaan xisaabaadka maal -gelinta rabitaanka. Si kastaba ha ahaatee, marka si fudud loo fiiriyo, tani waa dilaalnimo hubisa dhammaan hababka la heli karo inay jirto si lacagtaada loo badbaadiyo.
Waxaad kaloo u Baahan Tahay Inaad Wax Akhriso
Hubinta Koontada Vs Kaydka Kaydka
Waxaa jira laba badeecadood oo waaweyn oo hamiyadu bixiyaan waxayna kala yihiin adeegyada maareynta lacagta caddaanka ah iyo badeecadaha maalgashi.
Waa xaqiiqo cad sida shirkad kasta oo maal -gashi ay u kobciso dhinac maareyn oo cusub oo isla meherad ah oo inta badan la timaada kharashyo hooseeya oo ay u badan tahay, dulsaarka kaydka oo sarreeya.
Waxa xiiso leh, hammigu si isku mid ah ayuu u shaqeeyaa. Si kastaba ha noqotee, kuwani waa koontooyin aad la shaqayn karto markaad iska diiwaangelinayso Maalgelinta Aspirations.
#1 Xisaabta Heerka Aspiration
Koontadani waxay ku shaqaysaa mushaar-maxaad-rabtaa heer iyo kartidaada inaad ka baxdo mid kasta oo ka mid ah 55,000 ee ATM-yada ku jira shabakadda kuma xadidna.
Mid ka mid ah astaamaha cajiibka ah ee ka dhigaya himilooyinku inay soo baxaan ayaa ah xaqiiqda ah inay iskaashi la leedahay in ka badan bangiyo ku filan si ay ugu fidiso ku dhawaad ​​$ 2.46 milyan caymiska FDIC dul -dhige kasta.
Halkaan, waxaad 10% dib ugu heli kartaa iibsashada Isbahaysiga Damiirka sidoo kale waxaad heli kartaa ilaa 1.00% APY oo ku xiran shuruudaha hagaya.
Ma jiraan wax garaacaya fikradda ah inaad ka sarrayso waddo kasta oo aad doorato inaad jiido.
Marka, halkii laga heli lahaa habka caadiga ah ee lagu kasbado lacag si wax looga iibsado tafaariiqleyaasha caanka ah, madal maalgalintan ayaa kugu abaalmarineysa inaad wax ka iibsato meelaha ay aqoonsan tahay inay saamayn ku yeelanayso.
Iskaashiga Aspiration wuxuu keenay dhibcaha 'Aspiration Impact Measurement's People and Planet'.
Maalgelinta himilooyinka waxay qaadataa garashada deeqsinimada, sinnaanta goobta shaqada, iyo hufnaanta ka hor inta aysan ugu dambayn u oggolaan inay kula shuraakoobaan barnaamijkooda lacag caddaan ah.
Tani waa si loo hubiyo in aad waddo sabab la mid ah madal.
Waayadan dambe, kuwani waa shirkado ay iskaashi la leeyihiin: TOMs, Warby Parker, Lola, Tani waxay badbaadisaa Nolosha, Blue Apron, Burst, iwm.
Ma rabtaa inaad waxbadan ka ogaato Azlo iyo Novo? Akhri Faallooyinka Azlo vs Novo 2021
Hadafyada, ma jiro guddi iib ah, khidmadda macaamilka, khidmadda wax-qabadka iyo khidmadda dhinac saddexaad ee ay ururiso ayaa weli ah qaddar go'an.
Intaa waxaa sii dheer, bangiyada leh Aspiration waa mid aan kala go 'lahayn oo aad ku samayn karto macaamil ganacsi dashboardkaaga, ka bax oo aad aragto aragti dheelitirkaaga oo aan lahayn kharash dheeraad ah.
Waxaa jira tiro badan oo Robo-lataliyayaal ah oo bixiya adeegyo bangi oo la mid ah Aspiration. Marka, waa kuwan beddelka.
Aragtida iyo Culaysyada ee Maalgashiga Himilooyinka
Bangiga Lacag La'aanta ah Xulashada Maalgelinta Xadidan
Heerarka kaydka dulsaarka badan Ma jiro Roth IRA
Sanduuqa Joogtada ah ee Joogtada ah Khidmadaha Sanduuqa Isdhaafsiga
Tabarucaadka Sadaqada ah ee Tooska ah Arrimaha taageerada macmiilka ee heerka hoose ah
Bixi Waxa aad Doonto Hab Maalgelinta Xadka adeegsiga ee kaararka debit -ka caalamka
In kasta oo aad la kulmi karto shirkadan lataliyaha maaliyadeed si aad u daboosho baahiyahaaga maaliyadeed, waa inaadan ku dhex milmin adeegyadeeda oo dhan.
Fiiri heshiiska weyn ee jira si loo kharash gareeyo oo loo keydiyo akoonnada maaddaama ay ka bixinayso qiimayaal tartan iyo qiimeyn shirkad maaliyadeed oo lagu kalsoon yahay.
Markaad raadineysid xarun wax ku ool u ah maaliyaddaada, hammigu waa inuu ku jiraa liiska xulashooyinkaaga.
Sida Loo Maalgashado: Hagaha Bilowga ah ee Maalgelinta Suuqa Suuqa
Faallooyinka Qodobbada Tilmaamaha
Dib -u -eegista Bangiga Aspiration 2021: Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad | Sida ay u shaqayso.
Dulsaarka Deynka Ruqsadda haysta: Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay koontada kaydka onlaynka ah? Sideen u furaa akoon kayd oo onlayn ah?